फेरि लकडाउन गर्ने सोचेको पनि छैन सरकारले – AayoMail
फेरि लकडाउन गर्ने सोचेको पनि छैन सरकारले
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन १८ गते १८:५८
‘…एउटा कुरा म फेरि दोहोर्‍याउँछु। हामी अहिले लकडाउनमा छौँ भन्ने दिन अब भरे राति १२ बजेबाट परेन।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन साउन ६ गते टेलिभिजनमा देखिएका सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरे।
त्यसै दिन स्थानीय सरकारले राजविराजलाई पूर्णरुपमा लकडाउनको घोषणा गर्‍याे।
र, यो ‘लकडाउन’ अनि ‘सिल’ र ‘निषेधाज्ञा’ जारी गर्ने शिलशिला स्थानीय तहमा अहिले फैलिरहेको छ।
साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार महिने लामो लकडाउन अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि मूलधारको सन्चार माध्यम त्यसबारे बेखबर रह्यो।
त्यसको दोस्रो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले ‘अब भरे राति १२ बजेबाट लकडाउन सकियो भन्ने बुझ्नुप¥यो’ भनेपछि धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए। खतिवडाको शब्द चयनले अलमल भएपछि पत्रकारले पुनः प्रश्न सोधेका थिए।
लकडाउन हटाए पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको आवागमन प्रतिबन्ध चाहिं कायम् गरेको छ। हवाइ उडान चाहिं भदौ १ गतेदेखि खुल्दैछ।
सरकारले लकडाउन अन्त्य गर्नुका अनेक वाध्यता थिए। राजस्व संकलन ठयाम्मै रोकिंदा कर्मचारीको तलवसमेत धान्ननसक्ने स्थिति बन्यो। एक जना संक्रमित देखिंदा गरिएको लकडाउन खोल्दा अब यससँगै जोगिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुबाहेकको विकल्प सरकारसँग थिएन पनि। त्यसैले भनियो–स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन अन्त्यको खबर सुनाउनु केही घन्टा अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले संक्रमितको संख्या १७ हजार ९ सय ९४ जना पुगेको र कोरोना संक्रमण रहेका मृतकको संख्या ४० पुगेको सुनाएका थिए।
सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको करीब दुई साता पुग्न लाग्दा संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको छ। आइतबार मात्र थप दुई सय ४६ संक्रमित फेला परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले नियमित बिफ्रिङमा उल्लेख गरे।
यससँगै मुलुकमा संक्रमितको संख्या २० हजार तीन सय २० पुगेको छ। ज्यान गुमाउने कोरोना संक्रमितको संख्या ५७ पुगेको छ।
संक्रमित बढेसँगै सरकारले १२ वर्ष मुनी र ६० वर्षमाथि उमेरका व्यक्तिलाई घर बाहिर ननिस्कन आग्रह समेत गरेको छ।
पछिल्ला दुई साता हेर्दा लकडाउन अन्त्य गरेर संक्रमितको संख्या बढेको टिप्पणी समेत हुने गरेको छ।
तर, जनवस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी लकडाउन अन्त्य गरेपछि जोखिम बढे पनि अहिले फेला परिरहेका संक्रमितलाई ‘लकडाउन अन्त्य’ निर्णयसँग जोड्न नमिल्ने बताउँछन्।
लकडाउन अन्त्यको तीन दिनपछि मात्र छोटो दूरीका गाडी चल्न थालेका थिए।
डा. मरासिनी भन्छन्, ‘लकडाउन अन्त्य गर्दाको परिणाम १४ दिनपछि देखा पर्छ। अहिले देखिरहेका संक्रमित त यसअघि नै रहिरहेका हुन्,’ उनले भने, ‘लकडाउन अन्त्य भनिए पनि कार्यालय दुई सिफ्टमा चलाउनु पर्दथ्यो, संक्रमण फैलिएका क्षेत्रलाई निगरानीमा राखेर पिसिआर जाँच बढाउनु पर्दथ्यो, तर हामीले सामान्य अवस्थाझैं सबै छाडिदियौं।’
हुन पनि लकडाउन खुकुलो पार्दा बैंकिङ क्षेत्रसँगै सरकारी कार्यालयमा सिफ्ट अनुसार सेवा सञ्चालन रहेकामा अहिले सामान्य अवस्था जसरी कार्यालय सञ्चालित छन्।
आइतबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका दुई जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि एसएसपी भीम ढकालसहित तीन सय ७५ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
महाशाखामा सिल गरिएको छ।
हालसम्म मुलुकभर २ सय ५३ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि झनै झस्काएको छ।
काठमाडौं नाका भित्रिएकाहरूको स्वाब संकलन गरिएकामध्ये २४ जनामा साउन १५ गते कोरोना पुष्टि भएसँगै काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको झनै जोखिममा रहेको आँकलन गरिन थालिएको छ।
तराईका कतिपय जिल्लामा धमाधम निषेधाज्ञा जारी गर्न थालिएको छ।
गृह मन्त्रालयले साउन १५ गते सूचना जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रवेश नाकामा साँझ ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्मका लागि यात्रुलाई समेत प्रवेश रोक लगाइसकेको छ, भने अन्तरजिल्ला सवारी पासमा कडाइ गरिएको छ।
यो निर्णय अनिश्चतजस्तै हो।
अब फेरि लकडाउन हुने हल्ला पनि चल्न थालेको छ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका सचिव महेन्द्र गुुरागाईँले कोरोना जाँच बढाउँदै लजाने निर्णय भएको तर लकडाउनका विषयमा छलफल समेत नभएको बताए।
अब फेरि मुलुकभर लकडाउन गर्ने गरी नसोचिएको उनको भनाइ छ।
डा. मरासिनी पनि कोरोना संक्रमणकै कारण मुलुकलाई लकडाउनमा राख्न नसकिने बताउँछन्।
‘जहाँ घाउ छ त्यहाँ शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, पूरै शरीर शल्यक्रिया गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ संक्रमण बढी छ, त्यहाँ लकडाउन÷निषेधाज्ञा जारी गरेर परीक्षण दर बढाउनुपर्छ।’
प्रदेश २ को बारा, पर्सा र प्रदेश ५ को बाँकेमा आइतबारबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका आइतबारदेखि नै पाँच दिनका लागि लकडाउन लागू गरिएको छ। त्यस्तै, विराटनगरमा शुक्रबाररातिदेखि दुई साताका लागि लकडाउन लागू गरिएको छ।
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा गत शुक्रबारबाट पाँच दिने निषेधाज्ञा लागू छ। जलेश्वर उपमहानगरपालिका र मालपोत कार्यालय पनि बन्द छन्।
सुदूरपश्चिममा पनि कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा लागू गर्न थालिएको छ।
बझाङ जिल्लाको केदारस्यू गाउँपालिका वडा नम्बर–६ र ७ र थलारा गाउँपालिकका केही गाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।
कन्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१३ लाई पनि शनिबार रातिदेखि सिल गरिएको छ ।
संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको पर्सामा सोमबार बिहान ५ बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ।
यअसघि ९ दिनदेखि वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै निषेधाज्ञा थियो।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि–उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबाहिर ननिस्कन भनिएको बताएका छन्।
शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, दुध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, आइसीपि, ड्राईपोर्ट, भन्सार, आइसिपि, ड्राइपोर्टमा रहेका बैंक, क्वारेन्टाइन, फोहरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, औषधी जस्ता अति आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल, उद्योग, व्यवसाय, सेवा सञ्चालन बन्द गर्ने बैठको निर्णय छ।
विज्ञहरूले अब फेरि मुलुकलाई नै लकडाउन गर्न नसकिने बरू संक्रमणदर बढी रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरेर निगरानीसँगै पिसिआर जाँचलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका छन्।
छिमेकी मुलुक भारतमा २४ घन्टामा ५४ हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन्। खु्ला सीमा रहेको नेपालमा यसको बाछिटा पर्छ नै।
सरकारले सीमानाकामाथिको प्रतिबन्ध कायमै गरेपनि लुकिपिछी आउने क्रम अन्त्य भएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनकि गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसरी सीमावारपार गरेर नआउन आग्रह गर्दै कोही आएमा प्रहरी प्रशासनमा खबर गर्न भनेका थिए।
मास्कबिना नै हिँडनेलाई जरिवाना गर्न थालिएको छ भने भौतिक दूरी अनिवार्य रुपमा कायम गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ।
भदौ १ गतेदेखि लामो दूरीका यातायात र हवाइ उडान खोल्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा जोखिम त बढाउँछ नै।
डा.मरासिनी कोरोनासँग भागेर नभइ जुधेर अघि बढनुपर्ने बेला रहेको बताउँदै सामान्य अवस्थाझैं व्यवहार देखाउन नहुने बताउँछन्।
‘व्यक्ति आफैं चनाखो हुन जरुरी छ, कोरोना आफ्ना मान्छेलाई नलाग्ने अरूलाई मात्र लाग्ने हुँदैन। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न जरुरी छ।’
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा आठ हजार ८ सय ६१ जनाको पिसिआर जाँच गरिएको छ।
डा. मरासिनी कोरोना संक्रमित बढिरहेका क्षेत्रलाई पूर्ण निगरानीमा राखेर पिसिआर जाँचको दायरा बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
हटाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीलाई काँध थापिरहेछन्, देउवा र प्रचण्ड
अर्को नागरिकता विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै, मंसिर २ मा चुनाव गर्ने तयारी
एनएमबी बैंकद्वारा सुर्खेतको सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण
आलुको बोरामा ८३ लाख रूपैयाँ
आइएमई पे र स्मार्ट क्युआरबीच साझेदारी